မိုးလဝေသ Archives - MM Live News
ဇနျနဝါရီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၁ ရကျနအေ့တှငျး အအေးပိုလာနိုငျ၍ အထူးဂရုစိုကျပေးကွဖို့ရာ တကယျပငျလိုအပျပါကွောငျး
January 5, 2020 MM Live
ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်နေ့နဲ့ ၇ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ ကချင်ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့ပိုင်းဒေသအချို့တို့မှာ နေရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ်မှ မိုးအသင့်အတင့် ရွာနိုင်ပြီး ….. ကျန်ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ၆ရက်နေ့ ညပိုင်း ၇ နာရီ အချိန်ခန့်မှစ၍ မိုးမရှိပါကြောင်း လုပ်ဆောင်စရာရှိသည်များကို စတင်အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အတွင်းမှာလည်း ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုနှင့်အထက်ပိုင်း အရှေ့ပိုင်းဒေသအချို့တို့မှာ နေရာကွက်ကျားမှ နေရာကျဲကျဲ မိုးအနည်းငယ်မှ မိုးအသင့်အတင့် ထပ်မံရွာလာနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပြီး…. ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ချင်းပြည်နယ်အလယ်ပိုင်း နဲ့ မြောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအနောက်ဖက်ခြမ်းဒေသများ နဲ့ အလယ်ပိုင်း အထက်ပိုင်းဒေသများ ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးတို့မှာလည်း နေ့အပူချိန်များဟာ ….. #ဖြစ်မြဲခန့်အောက်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကာ #အအေးပို လာနိုင်သည်ဖြစ်သည့်အတွက် […]
မနကျဖွနျ ၅ရကျနအေ့တှကျ မိုးသညျးထနျခွငျး ၊ မိုးထဈခြုနျးရှာခွငျး ၊ မိုးသီးကွှကေခြွငျး၊ လြှပျစီးမိုးကွိုးအန်တရာယျမြား ကရြောကျနိုငျသော နရောမြား
ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်နေ့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်ဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာသွန်းနိုင်ကာ ချင်းပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်​မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးများရရှိနိုင်ပြီး … မိုးသည်းထန်ခြင်း မိုးထစ်ချုန်းရွာခြင်း လျှပ်စီးမိုးးကြိုးအန္တရာယ်များ ကျရောက်နိုင်ခြင်း မိုးသီးကြွေကျခြင်း နှင့် တခါတရံလေပြင်း ဆောင့်တိုက်ခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။လေပြင်းဆောင့်တိုက်ချိန် တစ်နာရီ ၃၀ မှ ၄၀ မိုင်ခန့်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ #မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကျရောက်လာနိုင်သောဒေသများ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ ကျောက်တော် ကြာနီ ဂျင်ဘီ ချောင်းပေါက် ဘူးသီးတောင် ဒေသတဝိုက် လိုင်ဇာ ဒေါ့ဖုန်းယန် ဗန်းမော် မြို့သစ် ဆင်ဘို နှင့်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတဝိုက်…. #မိုးသီးကြွေကျခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဒေသများ ကချင်ပြည်နယ် ချီဖွေ ဆော့လော် ခေါင်လန်ဖူးနှင့်အနီးဝန်းကျင်ဒေသတဝိုက်….. #မိုးရွာလာနိုင်သောအချိန်များ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည် ချင်းပြည်နယ် တီးတိန် တွန်းဇံ ဟားခါး ထန်တလန် […]
မိုးတှရှောလာဖို့ ၁၂နာရီခနျ့သာ လိုပါတော့တယျ…
December 26, 2019 MM Live
မိုးတွေရွာလာဖိုိ့ ၁၂နာရီခန့်သာ လိုပါတော့တယ်….Rainy Day…27/12/2019… ထန်တလန် ၊ဟားခါး ၊ဖလမ်း ။တီးတိန် ၊တွန်းဇံ ၊ဂန့်ဂေါ ၊ကလေး ၊ကလေးဝ ၊မော်လိုက် ၊ခန်းပတ် ၊တမူး ၊မိုးရေး ၊ဖောင်းပြင် ၊ဟုမ္မလင်း ၊ပင်လည်ဘူး ၊ဝန်သို၊ ကောလင်း ၊ကျွန်းလှ ၊သဖန်းဆိပ် ၊ ကန့်ဘလူ ၊ချပ်သင်း ၊ချပ်ကြီး ၊ထီးချိုင့်၊ မြတောင် ၊အင်းရွာ ၊ဘုံချောင်း ၊အင်းတော် ၊ကသာ ၊နန့်သာ ၊မန်စီ ၊မော်လူး ၊နန့်စီအောင် ၊မော်ဟန် ၊မိုးညှင်း ၊ဘီလူး ၊နမ့်မား ၊နမ့်မွန်း ၊ဟိုပင် ၊လုံးတုံ ၊အင်းတော်ကြီးအိုင် ၊ပင်ဘော ၊မိုးကောင်း ၊နမ္မတီး ၊ခန္တီး ၊လဟယ် ……. ဖားကန့် ၊ကာမိုင်း၊ မြစ်ကြီးနား ၊ဆဒေါင် […]
ဒီဇငျဘာလ ၂၇ရကျနမှေ့ ၂၈ရကျနေ့ အခြိနျအခါမဟုတျမိုးကွီးရှာမညျ့ တိုငျး ၊ ပွညျနယျမြား…
အချိန်အခါမဟုတ်မိုးကြီးရွာမည် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့မှ ၂၈ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး ….. ရွှေဘိုနယ်အထက် သဖန်းဆိပ်ရေဝင်ဧရိယာနှင့် ပင်လယ်ဘူး ဝင်သို ကောလင်း ကသာ ရွှေကူ ဗန်းမော် လိုင်ဇာ မိုးမိတ် မိုးညှင်း မိုးကောင်း နမ္မတီး အင်းတော် မော်လူး နန့်စီအောင် မော်ဟန် ဟိုပင် ဗန်းမောက် နမ့်မွန်း အင်းတော်ကြီး ပင်ဘော ဖားကန့် ကာမိုင်း မြစ်ကြီးနား ချီဗွေ ပန်ဝါ ဒေသများမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်…။ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းအခြောက်လှမ်းနေသူများ အချိန်မှိ လုံခြုံသော အမိုးအကာအောက်သို ရောက်ရှိအောင်စီးမံဆောင်ရွက်ထားကြပါလို့ အထူးသတိပေးအကြံပြုပါရစေ ….။ ရေထိမခံနိုင်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူများလည်း မိမိလုပ်ငန်းများ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု […]
ရနျကုနျအပါအဝငျ ဒသေအမြားစု သုံးရကျခနျ့ ဆကျအေးဦးမညျ
ရန်ကုန်အပါအဝင် ဒေသအများစု သုံးရက်ခန့် ဆက်အေးဦးမည် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လေ အေးများ ဆက်လက်ဝင်ရောက် နေသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့အပါ အဝင် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများစု တွင် ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်အထိ ပုံမှန်ထက် အအေးပိုနေမည်ဖြစ် ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတိပေး သည်။ ‘‘တချို့ဒေသတွေ ပုံမှန်ထက်၉ ဒီဂရိတ်စင်တီဂရိတ်လောက် ဆင်းချသွားတယ်။ နမ့်စန်တို့၊ ဘာတို့မှာ ဇီးရိုးဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ဖြစ်သွားတယ်။ တရုတ်ပြည်မကြီးပေါ် က လေအေးတွေက ဆက်ဆင်းနေတာကြောင့် နောက်သုံးရက်လောက် အထိ အေးနေနိုင်သေးတယ်’’ ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြား မှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဒေါ်ခင်ချိုချိုရှိန်က ပြော သည်။ မြန်မာ၏ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အနုတ် ဒီဂရီအထိ အအေးပိုနေပြီး […]
မွနျမာပွညျကို အအေးလှိုငျးဖွတျမယျ့ ဆိုတဲ့ ကိစ်စ အဖွဈမှနျ…
မြန်မာပြည်ကို အအေးလှိုင်းဖြတ်မယ့် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ အဖြစ်မှန် အအေးလှိုိင်း တကယ် ဖြတ်မှာလား မြန်မာပြည်သူတွေ ရတက်မအေးရအောင် နာဆာ ဆိုတဲ့ သတင်းဌာနကြီးက မကြာမကြာ ထုတ်ပြန်တတ်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းကြီးကို ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လား မေးလာကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် အအေးလှိုင်းအကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အအေးလှိုင်း (Cold wave) ဆိုတာ ၂၄ နာရီအတွင်း အအေး (အပူချိန်) ရုတ်တရက် လျှင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားခြင်း လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ တောင် နဲ့ မြောက် ဝင်ရိုးစွန်းတွေဟာ ရေခဲနေတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဟာ ၂၃.၅ ဒီဂရီခန့် အစဉ်တိမ်းစောင်းနေပြီး နေ ကို လှည့်ပတ်နေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်း နဲ့ မြောက်ခြမ်းဟာ နေရောင်ခြည် ရရှိချိန် […]
ယခု ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာလ အတှငျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ပုံမှနျထကျ ပိုပွီး အအေးပိုမယျ့ နရေ့ကျမြား
အလွန်အေးတဲ့ရာသီ…အလွန်ချမ်းတဲ့ရာသီ…ဆိုတာ ကျနော်တို့ လက်ရှိဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ ဆောင်းရာသီပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် အေးရင်လည်း အလွန်အေး…ပူရင်လည်း အလွန်ပူတဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ ခံစားနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. လက်ရှိ အေးတာထက်ပိုတဲ့ အလွန်အေးတဲ့ ဒဏ်ကို ရှေ့လာမဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ ရှိပါတယ်…ဒါကြောင့် ရာသီဥတုသတင်းလေးကို ပရိသတ်ကြီးတို့ အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်…. လာမယ့် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ ၁၀ ရက်အတွင်းမှာ ယူနန်ပြည်နယ်နှင့် ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းမှ ဖိအားမြင့်လေထုတွေဟာ လာအို ထိုင်း တို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် ကယားပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် မန္တလေးတိုင်း မကွေးတိုင်း နေပြည်တော် ပဲခူးတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း မွန်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်း ကနေ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်အထိရောက်ရှိလာမှာ […]
ပွငျးထနျတဲ့ အအေးလှိုငျးဖွတျမယျဆိုတဲ့ သတငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး သတိပေးခကျြ
November 19, 2019 November 19, 2019 MM Live
အခုတစ်လော လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ (၂၄) မှ (၂၉) အထိ မြန်မာပြည်ကို ပြင်းထန်တဲ့ အအေးလှိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ရှယ်ကြတာတွေ တွေ့နေရလို့ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခုနှစ် မြန်မာ့ဆောင်းရာသီ ညအပူချိန်ခန့်မှန်းချက်များကို တင်ပြလိုပါတယ် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုများနဲ့ဆက်စပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်းရာသီကာလတွေမှာ အအေးပိုတဲ့အခြေအနေ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ နည်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ဆောင်း ရာသီကာလ များမှာ အဝေးဆက်နွယ်မှုဖြစ်တဲ့ အယ်နီညို/လာနီညာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုကို ကြည့်တဲ့အခါ ….. ဒါနဲ့ပတ်သက် ပြီး လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းရေး ဗဟိုဌာန များကတော့ အပူပိုင်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အရှေ့ပိုင်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန် ဟာ ပုံမှန်အပူ ချိန်လောက်သာ ရှိနိုင်ပြီး အယ်နီညို/လာနီညာ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ […]